UPDATE: Maxaa ka jira in uu hirgalay heshiiskii ay wada-gaareen Puntland iyo Imaaraadka Carabta? +XOG SUGAN | HalQaran.com
Home Wararka Maanta UPDATE: Maxaa ka jira in uu hirgalay heshiiskii ay wada-gaareen Puntland iyo...
Boosaaso (Halqaran.com) – Muddo dheer kaddib, waxaa xalay magaalada Boosaaso ee Caasimada gobolka Bari ka baxday dooni sita Xoolo.
Dekadda Boosaaso ayaa waxaa xalay ka baxday Doontii ugu horraysay oo sida xoolo una sii jeeda Dalka Imaaraadka Carabta, sida ay sheegeen Mas’uuliyiinta maamulka Puntland.
Wararka ayaa sheegaya, in doonidaan ay saaran yihiin Xoolo dhan 3,990 neef, iyadoo ay Noqonaysa Doontii ugu horraysay ee ka baxda Dekadda Boosaaso, Tan iyo markii lagu soo rogay Xayiradda xoolaha nool ee Soomaaliya.
Madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland mudane Saciid Cabdullaahi Deni, ayaa dhawaan sheegay in dowladda Imaaraadka Carabta ay Ogolaatay in si toos ah looga dhoofiyo Xoolaha deegaanada maamulka Puntland.
Ugu dambeyn, heshiiskan ay wada gaareen Puntland iyo Imaaradka Carabta ayay ku baxeen xoolahaasi sida uu horay u sheegay Madaxweyne Saciid Deni oo ka hadlaayay Magaalada Boosaaso ee gobolka Bari.
Doon xoolo sida oo ka baxday dekedda Boosaaso
heshiiska Puntland iyo Imaaraadka Carabta